Boris Johnson (madzitateguru aOttoman) anogona kutanga nyonganiso muEurope iyo ichasimudza Humambo hweOttoman? : Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi we4 September 2019	• 10 Comments
Ndakafunga kuti yaive kuseka apo muverengi akaisa mhinduro inotevera: "Iye ndiTurk." Ndakashamisika zvikuru, chidimbu cheWikipedia chakateedzera icho chairatidza kuti Boris Johnson zvechokwadi ane madzitateguru eOttoman. Kwete chete chero madzitateguru eOttoman; tinogona kutaura zvakajeka nezvemadzitateguru ane basa rezvematongerwo enyika. Johnson anobva kune imwechete yeropa seye Ottoman wezvematongerwo enyika Ali Kemal. Chinhu chinonakidza kuwanikwa, nekuti inotsigira fungidziro yangu yeumambo hweOttoman huchangowana. Nditendere nditsanangure izvi zvakare.
Humambo hweOttoman hwaimbove hukuru pane hwese hwenyika uye hwaiona hwaipfuura makore zana apfuura. Kwemakore ndanga ndichiedza kuratidza pane ino saiti kuti vezvematongerwo enyika vese vakagadzirira kuita kwavo uye vese vanoshandira aristocracy globalization ajenda. Hazvishamisi kuti ikozvino taona chizvarwa chemhuri yevaOttoman vari kugadzirira mhirizhonga muEurope (kuburikidza iyo Brexit nyaya) kubva mairi Humambo hweOttoman huchapora. Ndanga ndichifanonyepedzera kupora uku kweHurumende yeOttoman kweanenge makore mashanu pano uye, sekureva kwangu, musoro wakarambwa zvakanyanya munharaunda inonzi yechokwadi.
Runyorwa rudiki rwe Wikipedia page from Ali Kemal:
Ali Kemal Bey (Ottoman Turkish: ََلي يمم; 1867 - 6 Mbudzi 1922) yaive Ottoman-Iye mutambi weTurkey mutori wenhau, mupepeti wepepanhau, mudetembi uye wezvematongerwo enyika akasununguka kusaina, aive kwemamwe mwedzi mitatu Gurukota rezvemukati menyika muhurumende yaDamat Ferid Pasha, Grand Vizier weHurumende yeOttoman. Akaurayiwa panguva yeHondo yeTurkey yeRusununguko.
Kemal ndiye baba vaZeki Kuneralp, aimbova mumiriri weTurkey muSwitzerland, United Kingdom, neSpain. Uye zvakare, iye ndiSekuru wedangwe wavose vari vaviri mumiriri weTurkey Selim Kuneralp, uye wezvematongerwo enyika weBritish Stanley Johnson. Kuburikidza naStanley Johnson, Ali Kemal ndiye sekuru mukuru wa British Prime Minister Boris Johnson, pamwe naJo Johnson (MP weOrpington), mutori wenhau Rachel Johnson, uye muzvinabhizimusi Leo Johnson.
Mune iri zita reOttoman Turkish zita, Ali Kemal izita rakapihwa, uye hapana zita remhuri.
Ndichiri kuda kusimbisa iko kutaura kwekupedzisira. Isu tinoziva kuti maAristocrats haazeze kuchinja mazita avo uye kuti boka iri revakuru rakahwanda pakati pevanhuwo zvavo vezvematongerwo enyika (ona semuenzaniso ichi chinyorwa. Nekudaro United Kingdom inotongwa neyeGerman aristocracy yeropa (sekufanana neNetherlands). Imba Saxony-Coburg uye Gotha (Saxony-Coburg-Gotha) pakutanga ndiye wedzinza wechiGerman ane nhengo dzake dzakatonga nyika dzakasiyana siyana dzeEurope. Utongi hwacho hunobva kuimba ducal yeSaxony-Coburg-Saalfeld (kubva kuimba yeWettin), iyo yakawana iyo mbiri-duchy yeSaxony-Coburg neGotha mu1826. Mune XNUM-X yezana, vana kubva mudzinza iri vakapihwa dzimwe nyika dzakasiyana siyana. Mu19, Mambo George V vakachinja zita remhuri yehumambo yeBritish kuita Windsor. Nhepfenyuro yekuparadzira uye nemaneja avo ekuona anoona kuti isu tinokanganwa zvese ruzivo urwu, kuti vanhu varege kuona kuti demokrasi ndeyekuita uye kuti zvirevo zvekare zvinoramba zvichitonga. Ndivo vanochengetedza iyo tenzi script.
Iyo Brexit nyaya iri chikamu chedigital master; iyo script inoratidzwa pakati pezvimwe zvinhu mumaporofita echitendero. Nekuziviswa kweBalfour mu1917 uye kumutswa kweHurumende yeOttoman, iyo nheyo yakaradzikwa yekutanga kwenyika yeIsrael. Hondo yenyika yechipiri yaidikanwa kuti ikwanise kuita izvi chaizvo, neine chikwereti chehorozheni yakaoma serezinesi rekugadzwa kwenyika yeIsrael mu1948. Nekutyora kweHumambo hweBritain mushure mekurasika uye nekuora kweaya manyoro ese, simba remauto rekuenda kuUS raigona kuitika uye nzvimbo dzekare dzese dzakaunzwa muchivande pasi pemhuri yehumambo hweBritain, neUS senyika yepasi pekorona yeBritish. Humambo hutsva hukuru hweAmerica (iyo inobhadhara mutero kune korona yeBritish) yave kuda kudonha. Fungidziro yangu yanga iri yemakore yekuti humambo hweOttoman huchapora. Izvi zvine zvese zvine chekuita neshe script, umo panofanirwa kuve nehondo yeJerusarema pakati pezvitendero zvikuru zviviri zvepasi. Kune izvi, Jerusarema raifanira kutanga rauya mumaoko evaZionist uye saka hondo yenyika yekutanga nerechipiri yakaendawo zvakare sekunyorwa. Hondo yenyika yechitatu ndiyo inotevera chinhu pane izvo zvinangwa.
Kuti uwane ichi chechitatu chinangwa chinhu, mhirizhonga dzinotanga kugadzirwa muEurope.
'Ordo ab Chao' chiLatin kuitira 'kurongeka kunze kwekusagadzikana', iyo yakakura yakashandiswa kubvira nguva yekufungidzira kuti ikwanise kudzamisa masimba zvakare. Icho chiperengo chinobva kuFreemasonry, icho chakakamurwa kuita zvikamu. Nzvimbo yepamusoro yepamusoro munharaunda yakavanzika iyi 33. Isu tinoona nhamba iyoyo yakawanda mune zvakakosha zviitiko kana zviitiko umo vane munwe mune pie. Basa renzvimbo dzakavanzika rinowanzo nyorwa kana kudzingwa senge zano rekurangana, asi kana tikango tarisa dzimba dzeumambo, tinoona kukosha kwakawanda kunoenderana neaya 'mairairo'. MaOranges, semuenzaniso, ane mukurumbira mune Maltese knighthood (sangano, chikamu chemuti wemhuri yemasangano akavanzika).
Idzi dzakavanzika dzese dzakavanzika pharaonic kana Bhabhironi mune zvakasikwa. Saka izvo zvinodzokera kune yekutanga huru piramidhi-based hurumende kubva kune yekutanga inozivikanwa "budiriro." Zvinotaridzika kusimba kuti mukati memagariro aya akavanzika mune (akapindirana) matavi eropa pharaonic anochengetedza mutsara wedzinza kuburikidza nemuchato wakarongwa.
"Ordo ab Chao" ndiyo motto yeScotland Rite Freemasonry. Izwi reChirungu 'Scottish' rinobva kwechiGiriki 'skotiā' (iro badzi rinobva pamasiketi, rakasviba, rine mumvuri, kubva mumumvuri waunorira, kubva pamikoto, rima). Iwe unogona kutaura kuti kana 'skotos' inomira yerima uye mumvuri, iyo 'skotiā' inomiririra iwo mwenje. Kana isu tikazoona kuti Freemasonry ndiLififerian, ipapo icho chingangodaro chiri chiedza chaLuciferian. Mushure mezvose, Mwari akati 'kuve nechiedza' uye saka skrini yakavhurwa uye mufananidzo ukaonekwa. Uku kuyeuchidza kwemutambo wePlaystation wakadzikwa, kuti mufananidzo uonekwe pachiratidziro uri ma pixels emwenje (ona iyo nyanzvi yekufananidzira).
Tembere yeVenus Scotia yakamira muIjipita yekare. Zvinonzi nyika yeScotland yakatora zita rayo kubva kuna mambokadzi weFarao weEgipita anonzi Scota. Ikoko tinoona chimwe chinongedzo neimwe yekare kwazvo raramo, iyo Egypt. Kukurukurirana kwekuti ndeupi humambo hwaimbove, Bhabhironi kana Ijipiti, hakuite sekunge wakunda chose kana ukachera zvakadzika, asi chirevo ndechekuti masangano epachivande anoita kunge akabatana nemapara enguva iyoyo. Chero zvazvingaitika, zviri pachena kuti kunoratidzika kunge kune kwakarongwa michato mukati meiri boka reropa. Dambudziko, zvakadaro, nderekuti mazuva ano zvese zvatsvairwa patafura senhau dzenhema kana dzidziso yekusangana, zvekuti vashoma vachiri kuzvitarisisa. Ini handisi kuzonetsesa pano futi. Bata iwe kuti uone kuti vanyoro vanga vachiroora sei kwemazana emakore kwete pane zvemanzwiro orudo, asi pahwaro hwekuziva zvakarongwa.
Albert Pike aiva munhu anokosha kubva kuScottish Rite Freemasonry. Akanga ari wepamusoro-soro akadzidziswa uye akapiwa chirongwa che 33e. Maererano nehurumende yepamusoro, Pike akanga ari mutungamiri muhondo yeMexicoan-America, gweta, mudetembi uyewo nhengo yeKuKluxKlan. Pike yakakurumidza kukura ikava Supreme Guru Chitsauko mukati megungano iri. Akanyora zvakare nekududzira tsika dzeMasonic uye akabudisa bhuku rekutanga refilosofi Morals and Dogma yeAkare uye Yakagamuchira Scottish Rite ye Freemasonry, bhuku rine simba mune sangano. The Pike memorial is the only outdoor sculpture in Washington DC in honor of a Confederate General. Icho chivako chimwe chezvigadziko zve 18 zveHondo yeVanhu muWashington, DC, iyo yakanyorwa pamwe chete mu1978 muNational Register yeZakanyorwa Kare. Saka Pike inoratidzika kunge yaiva munhu anokosha anove ari pamubhedha wehukuru hweumambo hweAmerica (ikozvino mukuderera) iyo yatinoziva iye zvino.
Freemasons haizombofi yakanzi yakakosha basa munhoroondo yehurumende. Ivo vanoshanda sezvazvaive kumberi uye vanogara vachitamba pasi kukosha kwavo (mundima inoonekwa). Unogona kuenzanisa izvo kunguva dzazvino, umo dzimba dzeumambo dzakaratidzirwa nevezvenhau semhemberero masangano ane simba rakadzoreredzwa nehurumende dzedemokrasi (iyo yechokwadi iri farce). Saka kana iwe uchitsvaga Wikipedia yekuverenga kwepamutemo kwevakambotaurwa, ivo havana basa rakakosha zvakadaro. Mune zvese zviratidzo izvo zvatinoona zvakatikomberedza, zvisinei, isu takazara neye freemasonry chiratidzo (Max Verstappen, kwete. 33, semuenzaniso, uye chessboard iri pane Fomula 1 mureza). Iwo maFreemason anoratidza kuti ari kutonga, asi mashesi anooneka mapofu.
Muna 1871, Albert Pike akanyorera tsamba yake kuwirirana naye weItaly Freemason Giuseppe Mazzini. Mutsamba iyi akafanotaura hondo nhatu dzenyika. Iko mairi maviri okutanga ave akanyorwa zvakakwana. Verenga kushandurwa kwemagwaro aya pasi apa:
Hondo yekutanga yenyika inofanira kusikwa kuitira kuti Illuminati ipedze simba reCzars muRussia uye inoita kuti nyika isati ipo Communist. Kusiyana pakati pemadzimambo eBrithani nemaGermany kuchashandiswa nevanoshanda veAlluminati uye vanoshandiswa kuvaka iyi hondo. Pakupera kwehondo, communism inovakwa uye inoshandiswa kuparadza hurumende uye zvezvitendero
Hondo Yenyika Yechipiri inofanirwa kubhadharwa nekushandisa kusiyana kwemafascist uye veZiological politist. Iyi hondo inofanira kushandiswa kuparadza Nazism uye kuvimbisa kuti zvematongerwo enyika zveZioni zvakasimba zvekugadza hurumende yenyika yeIsrael muPalestina. Munguva yeHondo Yenyika Yechipiri, hutongi hwemarudzi ose hunofanira kusimba zvakasimba sechirwere chechiKristu, kusvika panguva yatinogona kushandisa kusiyana uku kwekupedzisira kwevanhu munzanga.
Hondo yechitatu yeHondo inofanirwa kuve yakashongedzwa (nevanoshanda ve "Illuminati") kuburikidza nekukakavadzana pakati pezvematongerwe enyika neZioni uye vatungamiri venyika yeIslam. Hondo inofanira kunge yakaitwa nenzira yakadai kuti Islam (nyika yevaMuslim yeArabic) uye zvematongerwe enyika Zionism (iyo State of Israel) inoparadza mumwe nomumwe. Izvo nyika dzinobatanidza kupikisana iyi dzichanyatsopinda mukuzara kwakakwana mumuviri, mutsika, mumweya uye mune zveupfumi. Tinosunungura vanyengeri uye vasingatendi uye isu tichatsvisa dambudziko guru revanhu. Tichasunungura kusatenda uye hutsika munyika. Ticharatidza kutyisa kwaro. Ndicho chikonzero chekukara pakati pevanhu. Ipapo vanhu vanofanira kurwisa kwose kwose vachirwisana nevashomanana, vapanduki vasingateereri Mwari vachaparadzwa uye vaparidzi vepambani vachabviswa. Ruzhinji rwevanhu ruchaodzwa mwoyo muChiKristu. Pfungwa dzavo havazozivi nzira kana kambasi. Vachatsvaka zvakanakisisa. Vachada kutarisa kunamatwa kwavo pane chimwe chinhu. Pakupedzisira Chiedza chechokwadi chaRusifer chicharatidzwa kuvateereri. Kuratidzwa kwaLusifera kuchatevera kuparadzwa kwechiKristu uye kusatenda, izvo zvese zvichange zvichitadziswa mune rimwe dambudziko.
Zvinowanzotaurwa kuti tsamba iyi ndeyechokwadi, nekuti izwi rekuti "Nazism" raisambove richizivikanwa mu1871. Izvo zvinofuratirwa mukufunga ikoko ndezvekuti ivo vanogadzira script vanogona kuuya nematare pamberi poruzhinji rwese rwusati rwaziva mazwi aya. Saka kana iwe ukaisa zita rekutengesa pamusika sekambani, iyo yekushambadzira iyo ichave yakafungisisa nezvayo munguva pfupi zvikuru kupfuura iyo yeruzhinji ichaona izvi. Zvakanaka, kana Pike akarondedzera (chiporofita) rugwaro pane mumwe wake Mazzini, ipapo panogona kunge paine izwi mukati maro risingazivikanwe kune yeruzhinji kusvika makore akazotevera.
Zvinoratidzika kuti hondo yechitatu yenyika yakarongwa. Izvi, zvichiitika, zvinopindirana nemufananidzo wehuporofita hwezvitendero zvenyika, izvo zvinoratidzika sezviri pachena zvinopesana (udhimoni), asi zvakanyatsofanana munguva yekupedzisira-nguva (ona pano). Nemuenzaniso, vose vaMuslim nevaKristu vanotarisira kupesana naKristu (Dajjal muIslam) iyo ichazviratidza semesiya. Uyezve kutarisira ndiko kudzoka kwaJesu (ona muenzaniso iyi tsanangudzo kubva Sheikh Imran Hosein). VaJudha vanotarisirawo kuti mesiya uye Jerusarema vari kutungamira muzvitendero zvose izvi. Kubatanidzwa kwehurumende yeIsrael kwakakwanisawo kuita basa guru muhondo dzekutanga mbiri dzepasi pose, kunyange zvazvo izvi zvave zvakanyatsozivikanwa muzvinyorwa zvenhoroondo. Muhondo yekutanga yenyika, nyika yakachengeterwa nyika yeIsraeli mune Balfour statement. In the Haavara chibvumirano kubva ku1933 kutamira kwevaJudha kusvika kuPalestina kwakanga kwave iko kunyorerwa neGermany. Nyika yeIsrael yakavakirwa nguva pfupi mushure meHondo Yenyika Yechipiri. Hondo Yenyika Yechipiri yakabata basa rinokosha mune izvi.
Hondo yenyika yechitatu saka, maererano netsamba yaPike, ichamuka kubva mumakakatanwa ari pakati pevezvematongerwo enyika veZionist nevatungamiriri venyika dzechiIslam. Kana tikatarisa nezviporofita zvechitendero, tinoona Jerusarema riri pamberi rinotungamira. Kuvakwa kwakarongwa kwetembere yaSoromoni kunotora chikamu chakakosha mune izvi zvichienderana nezviporofita zvenguva yekupedzisira kubva kuzvitendero zvakataurwa. Kuvakwa kwetembere iyoyo kunotaurwa mune izvo zviporofita sechiratidzo chekuuya kwaanopesana naKristu, icho zvakare chiratidzo chekuti kuchave nehondo huru, inobata nyika yose. Zvinoshamisa kuti Munyori weAmerica weMatunhu, Mike Pompeo, akashanyira makatuni ari pasi pehusikiti ikozvino yakavakwa mumatongo eiyi tembere (veZionist vezvematongerwo enyika?) Kwete kare. Iye apa akaona mufananidzo weiyi tembere (ona pano). Izvo zvose tsamba yaAlbert Pike, uye uprofita hwekupedzisira-nguva, uyewo zviratidzo zvinoratidza kuti chii chichaitika mumagwaro iwayo, chinoratidza kuti tiri kupupurira script guru. A script inozivikanwa nevatungamiri vemasangano akavanzika akadai seiyo 33e mason degree.
Saka tinogona kutaura kuti maFarao eropa anoziva gwaro uye anotungamira mafambiro ezvinhu mukuwirirana nechinyorwa ichi. Chikamu chakakura chavanochengetedza ndeche 'Ordo ab Chao'. Ndokusaka tichigona kutaura tine chokwadi chekuti vanogara vachigadzira nyonganiso kuti vawane simba rakawanda. Ndokusaka ndichifanotaura kuti Brexit inoenderana neiyi script uye iyi ndiyo harbinger ye humwe simba pamusoro peSislamic force field kubva tsamba iri pamusoro inobva kuPike. In ichi chinyorwa Ini ndakatsanangura kuti ndanga ndichifanofungidzira kwemakore kuti Humambo hweOttoman huchapora uye kuti Brexit ichashandiswa sei kukonzera nyonganiso muEurope. Saka Boris Johnson anogona kunge asiriwo mudiki wedzinza rakadaro reropa raFarao. Ini ndinotora chinzvimbo chekuti vanhu vese vatinoona mune zvematongerwo enyika uye vezvenhau vane mavambo akadaro uye kuti saka ivo vanogaro kupira fanicha mukuzadzikiswa kwegwaro raTenzi.
Source chinyorwa listings: wikipedia.org
Erdogan inodana nyika yeIslam kuti ibatane
Kuguma kwekupedzisira kweMadokero yeRoma yeRoma nekuedza kuedza kuVenezuela
Sheikh Imran Hosein anofanotaura hondo yeConstantinople (Istanbul)
Tags: mabviro, madzinza, Boris, Brexit, Featured, Johnson, Ottoman, Ottoman, mupfumi, Turks, Turkish, MaZionists
JtheRed akanyora kuti:
4 September 2019 pa 14: 03
Ndatenda nebasa renyu rese.
Handina chokwadi kana iwe wakambonzwa nezveSheikh Imran Hosein. Vanga vachitaura kwemakore kwemakore kukosha kweConstantinople munguva dzekupedzisira uye nemaitiro eChristian Orthodox neMuslim nyika vachabatana, uye kuti kana Constantinople ichidzoserwa inguva iyo Al-Masih ad-Dajjal ("mesiya wenhema, murevi wenhema." , munyengeri ”) mukudzidzisa kweIslam kuchadzoka. Heino vhidhiyo kana iye ari kutaura nezvazvo.
4 September 2019 pa 14: 05
Kana iwe ukatsvaga pa Sheik Imran Hosein mune iri pamusoro chinyorwa uchaona kuti ini ndiri kuyerera kwaari mune ichi chinyorwa.
4 September 2019 pa 15: 13
Zvakakwana bvumirana neiyi yakanaka kuongorora! Panguva imwecheteyo, ino yezvematongerwo enyika nehupfumi imba yemakadhi yakashandisirwa kwemakumi emakore kuti iiswe munzira yakatarwa. Isu ikozvino taona zviratidzo zvese zvichiitika, semuenzaniso kuisirwa kwemhosva ine mhosva semusoro weECB. Iye zvino taverenga munhau kuti mutemo weECB wekutenga hauna kushanda uye kuti wakangoita kuti Euro ive panjodzi. Izvi ndizvo chaizvo chinangwa chebutiro ajenda, kunyura zvese panguva imwe chete ...
Nyungudika zvakanaka akanyora kuti:
4 September 2019 pa 15: 17
Ini ndiri muKristu akazvarwa patsva uye ndinoda kuti mundidzidzise zvinhu izvi zvese .. Symbolism yakamboita kuti ndiitwe schizo nehuwandu hwevanhu vandakataura uye ndoziva mukutora avo vari kushanya muFreemasonry, zvakare hunhu hwavo hunhu uye kutya Tics dzinogona kurohwa chidimbu kubva 3 metres kure uye vanamate zuva rega rega kuti mweya yavo "zvinyatsozvifunga ivo pachavo" vasati vabvuma chisimbiso cheBeast!
1 chinhu hachingonzwi zvakanaka pandiri, Kana iwe uchigara uchiratidza kuti iyo Luciferian system isizvo, saka nei urikutevedzera zvisina musoro? iyo "script" haisati yangova chinhu kunze kweiyo "ajenda kuronga" yaSatani (uyo asina kumbozviwisira iye nehama nehama dzecourse asi anongodaidzwa kuti Lusiferi) kukanganisa Mwari nezvisikwa zvake, uye kana iwe uchinge watora kare mumwe munhu saPike chii iri kukwira, zvinoreva kuti ari "kuchinja" izvo zvava kuda kuitika, zvinoenderana nehurongwa hwepasi, uye regai Satani ave iye ane hutongi pamusoro penyika.
Ini zvakare ndinokupa zano kuti uende kuburikidza neMesopotamia nguva ye "mafashama asati auya", Kana iwe ukatarisa kuburikidza ne disinfo (isu tiri mamirioni emakore, Mwedzi chidimbu chedombo patakaburukira lol) ipapo ndoziva zvechokwadi kuti iwe uchasvika pamitsva mitsva, ini ndinoona yakawanda yeMweya Mutsvene mauri Martin, Uye ndinovimba kuti chirevo changu chichaita kuti utarise zvishoma zvakasiyana nemaitiro ekuti zana re 21e (rakavengwa, rakashorwa uye rakatyisidzira) Mukristu anozvitarisa, ini kwete Katurike, Reformed etc, Zvazviri "Kuzvarwa patsva"
4 September 2019 pa 16: 05
Zvichienderana nekutenda kwako kwechiKristu, ndinonzwisisa kupindura kwako, asi ndinokukumbira iwe (nemunhu wese unoverenga izvi) kuti uverenge chinyorwa ichi nokungwarira, kuti unzwisise zviri nani nzira yekuisa mazwi 'satani' uye 'Lucifer':
4 September 2019 pa 16: 08
Usati wapindura zvakare ndinoda kukumbira kuti unyatsoverenga uye kunyatsoverenga zvese zvinyorwa pasi pebhuruu zvinongedzo. Zvikasadaro isu ticharamba tichitarisana nekuvhiringidzwa kwekutaura kweBabironi.
4 September 2019 pa 19: 52
Saka hey !!! PaPC, nhare 2x yakarova izvo zvandaida kunyora!
Kuti parutivi, ini ndakanga ndanyora bhuku rakanaka iro ini handingade kutanga zvakare neruremekedzo rwese rwakakodzera. Nenzira chaiyo uye hapana chinhu chisingapikisi kana chekuvenga kutaura, ndakanga ndachiita futi (pamwe "ivo" vaita chimwe chinhu, Demotivation?)
Ini ndinonzwisisa kwaunobva nekuti iwe unoziva tsika dzadzo dzesoteric, Asi ziva muvengi wako, uye usavatevedzere, Zvese izvo "ivo" vanovenga, vanozvinyudza, vanopa zvakamonyoroka kupfuura zvaMwari zvavakaronga, zvino revers kazhinji ndiyo chokwadi , Hukuru nhamba ye "Demiurge" mareferensi ayo anonyatso kutaurwa anorehwa kuna Mwari, Chinhu chakawedzera seMarvel's Endgame etc (Endgame iri zvakare dingindira rakakura zvino muzvinhu zvese)
Tine urombo kuti zvimwe zvirimo zvisiripo izvozvi, ini ndakasangana nebasa rako gore rino pandanzwa murume wechirungu achitaura kuti "Dome yedombo" raive ririmoto panguva imwechete saNrere Dame (zvino uye ipapo ndipo patingafanira kutsvaga kuti titarise "zviitiko" zvinouya) uye hapana mumwe kunze kwemaArabhu mawebhusaiti uye iwe wakauya kuburikidza ne "Google" kana nzvimbo dzese! Bold kuverenga back kuti wanga iwe iwe wakanyora mukadzi uyu mu "Diki Kuchengeta" uko ini ndinotenda kuti MKULTRA maitiro ari kuitiswa kuburikidza nekushungurudzwa kwepfungwa, Ivo zvakare vane huwandu hukuru hwekufananidzira marogo mukati uye pane zvivakwa zvavo, Zvino pane zviitiko zvakawanda vaimbove veKatorike uye vaitungamirirwa nevanhu vekereke
(Ndakuziva kwemakore !!!! 111)
4 September 2019 pa 16: 43
Kune avo vane maziso ekuona, iyo yese geograini mamiriro akajeka segirazi.
Ko iyo Fed Kugadzirira Kuipfuura US Dollar?
Kutaura zvisingaitwe uye zviitwe nemusoro unobuda weBhangi reEngland nemamwe mabhangi epakati nepakati vanongedza zvakanyanya kuti pane mamiriro ezvinhu akaipa kwazvo mumabasa ekupedza basa remadhora eUS semari yenyika inochengeterwa nyika. Mukuita uku, izvi zvaisanganisira iyo Fed kunokonzeresa kushungurudzika kweupfumi kushungurudzika. Kana chimiro ichi chakanyatsoiswa mumwedzi inouya, Donald Trump achadzika mumabhuku enhoroondo seyechipiri Hebert Hoover, uye hupfumi hwenyika huchapunzika mukudonha kwakanyanya kubva kuma1930. Hezvino zvimwe zvinhu zvakakoshesa kufunga nezvazvo.
Bank of England kutaura
Anenge-wekuenda pamutungamiriri mukuru weakanakisa Bank yeEngland, Mark Carney, akapa hurukuro inoshamisa pamusangano wapagore wepagore wevakuru vemabhangi uye vezvemari muJackson Hole Wyoming paAugust 23. Iyo 23 peji kero kune vamwe vanoshanda pakati pemabhangi uye emari mukati mechiratidzo chiratidzo chikuru chekuti iyo Powers That Be inomhanya nyika yepakati mabhangi anoronga kutora nyika.
Panguva imwecheteyo, chokwadi, chidzitiro chakakura chetsiva chiri kugadzirwa nenzira yeBrexit, idzo dzinonzi hondo dzekutengeserana uye kurwa kuri kuwedzera pakati peIsrael neIran.
Avo avo vane chokwadi chekutarisira izvi vanomiririra simba riri mundiro inooneka uye, sevanokodzera vafambisi vetsoka, vanoona basa rakapfuura riine hunyanzvi kubva mundima isingaonekwe. Semuenzaniso idzi mbiri dzeBIS lackeys ...
9 September 2019 pa 15: 33
tsono salmoni haifanire kuuya nekushamisika kuti dhayeyi ichasiya yakaipa puroti chikepe seye 31 Gumiguru (Brexit).
"Mario Draghi anosiya 31 muna Gumiguru seMutungamiriri weECB."
13 September 2019 pa 12: 23
saka klaasje ave kutotanga kuzvivhara pachavo paine tsamba yakatumirwa kune super mario..of iro deed. Asi chakasara pakufunga ndechekuti vanosangana vese muchivande mwedzi wega muBasel ...
« Iyo Brexit nyaya inogara yakave chirongwa chakatemerwa
NOS uye RTL inopa kutarisisa kuzere kwakadzika kudzikisa zvigadzirwa zvavo zvakadzama »
Kushanya kwakazara: 4.292.438
SandinG op Coronavirus covid-19: izvo zvatisinganzwe nezvaMaurice de Hond naWillem Engel, chikamu 2